Public Kura | » लास लास – Public Kura
पत्रकारको प्रश्नले गम्भीर रहेको उसको अनुहार एकासी प्रफुल्लित भएर आयो । ओठमा मुस्कान छाउँछ उसको । सबैलाई एकपल्ट सरर हेरेपछि खित्का छाडेर मज्जाले हाँस्यो ऊ । फेरि अन्योलता छायो सबैमा । सबै मानिसलाई हेर्छ । पत्रकारलाई हेर्छ । अनि भन्छ, ‘मलाई यो मोडमा मेरो जिन्दगीले ल्यायो । मेरो मायाले मलाई अलपत्र पार्यो । तपाईको त्यो सद्धे समाजबाट मलाई पलायन गरे । म अलपत्रिएँ । म थोत्रिएँ । सुन्नु हुन्छ मेरो जीवन गाथा ? मेरो जीवनका भोगाईहरू । जिन्दगीले दिएका मजाकहरू ? म कठपुतली भएँ । मलाई कठपुतली बनाइयो । के तपाई पनि अझ मलाई मजाक बनाउन चाहानु हुन्छ ? खेल्नुस् । कति खेल्नु हुन्छ मेरो भावनासँग । मेरो भोगाइसँग ।’
हो महाशय, उसको एउटी प्रेमिका थिई । ऊसँगै एउटै क्याम्पस पढेकी । उसले उसलाई औधी माया गर्थ्यो । बाबुले मसँग कहिलेकाही उसको विषयमा कुरा गथ्र्यो । बेला बेला त बाबुको उनीप्रतिको प्रेम देख्दा मलाई नै डाह लागेर आउथ्यो । मैले भन्ने गर्थेँ – त्यति बिघ्न माया पनि गर्नु हुन्न है त बाबु । जस्को बोझ उठाउन असमार्थ होस् । मायाको बोझले उनीसँगै आफू पनि पिरोलिन सक्छ । यस्तो बेला उनी गम्भीर भएर भन्ने गर्थे – भाउजु मैले उसलाई दिने भनेको नै माया मात्र त हो नि । जीवनभरि साथ दिन्छु भन्ने बाचा त अधुरो नै हुनेछ । मायाले मात्र जीवनको गोरेटो नकोरिदो रहेछ । हाम्रो मानव समाज दुई तिहाइमा खण्डित रहेको छ । यसै खण्डित समाजको हामी कठपुतली त हौँ । हामीलाई नचाउँदो रहेछ समाजले । हामी समाजको तालमा ताल मिलाएर नृत्य गरिरहन्छौँ । उच्च र निच्च समाजमा हाम्रो अस्तित्वको मोल किमार्थ छैन । दुनियाँले प्रगति गरे ।
ठूल–ठूला अविस्कारहरू गरे । संसारलाई एउटा मुठीमा कैद गर्ने क्षमता राख्ने भए । आज संसार साँघुरिएको छ । संसार पार्दशीत भएको छ । दुनियाँमा मानिस पादर्शीत कुरा गर्ने भएका छन् । तर यो हाम्रो समाज सङ्कुचनको घेरोबाट माथि उठ्न सकेन । अविष्कारिक दुनियाँमा हाम्रो समाजको विचार अविस्कारित हुन सकेको छैन । उसको उच्च समाज र हाम्रो निम्न समाजको तालमेल हुने सम्भाव छैन । खुशी उसको हो, खुशी मेरो पनि हो । फेरि भएन उसको समाज र उसको परिवारबीच हाम्रो मायाको अर्थ, बेअर्थ हुनेछ । भाउजूको कुरामा गाम्भीरता थियो । त्यस गम्भीरतामा पत्रकार अल्मलिन्छ । त्यस कुराले म पनि अल्मलिन्छु ।
बिस्तारै हामीबीच सम्वादको लहरहरू फुटे । ऊभित्र कुण्ठिएको भावहरू बग्न नपाएर तलब भएका थिए । बिस्तारै ऊ पग्लियो । हिमालझैं । मूल फुट्यो तालको । उसले भन्यो, ‘अजय मैले हारेँ आफूबाट । उसले जिती । म आदर्शको खोक्रोपनमा अल्झिएँ । बिजाए आफ्नै मुटुमा आदर्शको काँडा । घोचिरहन्छ पलपल । पोल्छ मुटुभित्र कहाँ–कहाँ । ऊ समाजको ठूलो जातको, म सानो निच तल्लो जातको, त्यहीमाथि म बेरोजगार मान्छे । कसरी म उसको जीवन सुखमय बनाउन सकुला र । फेरि उसको बाबाको सपना घरको ठूलो छोरीलाई आफूले हेरेको, आफ्नै जातको केटासँग विवाह गरिदिने । त्यतिमात्र होइन एउटा सरकारी जागिर भएको मान्छेले उसलाई सुरक्षा दिन सक्ने छ ।
स्वप्निलको आखाँ डम्म सुनिएको थियो । मसँग उसलाई सम्झाउने हुति थिएन । म पनि पग्लिएँ ऊसँगै । सकेसम्म आपूmलाई सम्हाल्ने सल्लाह बाहेक केही थिएन मसँग । त्यही औपचारिकता निभाएर म फकिएँ । केही दिनपछि मैले उसको भाउजूलाई भेटेथेँ । स्वप्निलले घर छाडेको कुरा सुनाई । केही ठाउँतिर मैले खोजे उसलाई फेला पार्न सकिनँ । पछि सुनें उसले मानसिकता गुमाएको कुरा ।
मेरो शरीर फतक्क गलेर आयो । मथिङ्गल फनफनी घुम्न थाल्यो । अब अरु सुन्नु थिएन । अनि जान्नु पनि थिएन । त्यो भिडमा बसिरहने आवश्यकता पनि थिएन । मेरो शरीरको भार दोबर भएर आयो । मान्छेले घेरिरहेका थिए त्यस पागलको लासलाई । मभित्र धेरै प्रकारको खुल्दुली चल्न थाल्यो । सञ्जुले किन उसको हत्य गरी त ? किन ? समाजको मान मर्यादामा खोट लाग्ने भयले ? यता आफ्नै प्रेमीको यस्तो हालत देख्न नसकेर मोक्ष दिएकी ? यस्ता धैरै प्रकारका आलोचना– प्रतिआलोचनाले मन उद्वेलित भयो । म त्यो भिडलाई छोडी आफ्नो बाटो लागे । By nepalisahityaghar